I-OSX: Enza ngendlela oyifisayo i-Terminal Window yakho | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 21, 2007 NgoLwesibili, Septhemba 16, 2014 Douglas Karr
Abaningi benu bayazi ukuthi ngingumuntu omusha we-Mac newby. Enye yezinto engizijabulelayo nge-OSX ukuguquguquka kokubukeka nokuzizwa kwesixhumi esibonakalayo. Leli thiphu lingazwakala libuthakathaka ngempela, kepha ngiyalithanda. Ngangivame ukwenza ngezifiso iwindi lomyalo wewindows ku-Microsoft Windows noma nini lapho ngiyisebenzisa… kepha izinketho zazinqunyelwe.
Nge-Terminal, ngingacacisa ukusetshenziswa kwanoma iyiphi ifonti, ububanzi bezinhlamvu, ubude bomugqa, usayizi wefonti, umbala wefonti, isithunzi, ingemuva, i-opacity yangemuva, isikhombisi esisetshenzisiwe… wow! Khuluma ngokuthatha iwindi le-Shell ulenze libukeke lihle. (Kulungile, ngiyazi… ngiyi-uber geek). Kepha lokhu akubukeki kuhle yini?
Uma ungumuntu omusha we-OSX futhi, kulula kakhulu:
Vula iTheminali kusuka kufolda yakho yezinhlelo zokusebenza noma kudokhu.
Iya kumenyu yakho ye-Terminal bese ukhetha izilungiselelo zeWindows.
Yenza izinguquko ongazithanda.
Okubalulekile: Iya kwimenyu yakho yefayela bese uqhafaza ku-Sebenzisa izilungiselelo njengokuzenzakalelayo
Ngokuzayo lapho uvula iTheminali ngaleyo ndlela enqamulelayo, uzothola iwindi elifanayo lokuvula. Manje ukube bengazi ukuthi ngithayipha ini lapho…. 🙂
Tags: osx ukuphelaIsikhumulo
Jan 21, 2007 ngo-1: 33 PM
Ngingumuntu omncane we-Mac newbie uqobo lwami uDoug, ngiyabonga ngolwazi. Ngiyakuthanda ukubukeka kwewindi lesiginali elisobala elingabonakali lutho!